Abakhiqizi BaseMetal Mesh Nwebekayo - Abakhiqizi Base China Bandisa I-Metal Mesh
Insimbi engenwetshiwe luhlobo lwensimbi yeshidi elisikiwe futhi layelulwa ukwenza iphethini ejwayelekile (imvamisa eyenziwe ngomdayimane). Ngenxa yendlela yayo yokukhiqiza, insimbi enwetshiwe ingenye yezinsimbi zomnotho eziqine kakhulu, noma izinto zokugaya emakethe. Insimbi enwetshiwe yenziwa kusuka eshidi eliqinile lensimbi, futhi ayilukiwe noma ifakwe insimbi. Ngakho-ke ngeze kwaphulwa. Izisetshenziswa zensimbi ezinwetshiwe zifaka insimbi eyandisiwe yokwakha, insimbi enwetshiwe, i-BBQ yensimbi enwetshiwe, i-mic enwetshiwe ...
I-Micro Expanded Metal
1.Izinto zensimbi enwetshiwe ezincane zingahlukaniswa zibe yinsimbi ejwayelekile yekhabhoni, insimbi engagqwali, insimbi yensimbi, insimbi yethusi, insimbi ye-aluminium, insimbi yensimbi, insimbi ye-nickel njll. Ubuchwepheshe bemishini yensimbi enwetshiwe ihlanganisa ukwelula nokukhula. Ubukhulu be-mesh yensimbi enwetshiwe ngokuvamile isuka ku-0.3mm iye ku-0.8mm. Ubukhulu be-mesh buvame ukusuka ku-1mm * 0.75mm buye ku-200mm * 100mm. Umumo ojwayelekile womgodi ungaba idayimane, unxantathu, umlinganiso we-hexagonal noma wezinhlanzi njll. Uma udinga eminye imininingwane ...
Ukuhlunga Okuhlanganisiwe Kwensimbi
I-1.I-filter eyandisiwe ifakwa ungqimba lwangaphandle lwesihlungi ukuvikela iphepha lokuhlunga langaphakathi noma ukotini wokuhlunga. Izinto ezisetshenziswayo eziwumbala wensimbi zinsimbi engenasici, insimbi ebunjiwe, i-aluminium ne-zethusi njll. Lezi zinto zensimbi ezisetshenziselwa i-lemeshini lemifanekiso zinezimpawu zokuphikisana ne-acid, ukumelana ne-alkali, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana kokungezwani kanye nokuphikiswa kwe-abrasion, filtration ezinzile, ukunemba okuphezulu njll. Imeshini yokuhlunga eyenziwe ngalezi zinsimbi zinezinzuzo ...
I-1.BBQ yensimbi enwetshiwe imvamisa yenziwa ngensimbi ebunjiwe, futhi usayizi ojwayelekile ingama-48 * 31cm, 31 * 25cm. Izindlela zokwelapha ezisezingeni eliphezulu ezifana nokufakelwa kwethambo, i-chromium plating, i-elektroli, ukupholisha kanye nezinye zenza i-barbecue wire mesh ukuthi ibalule izinzuzo zokushiswa kwamazinga okushisa aphezulu, i-anti-rust, engenabuthi futhi engenangqondo. Insimbi eyandisiwe engu-2.BBQ ingahlukaniswa ibe yiGrisi ye-BBQ enokulahlwa kanye ne-BBQ eqinile. Kodwa-ke, ama-mesh we-barbecue atholakalayo adume kakhulu emhlabeni we-barbecue. Okuqukethwe kwe-BBQ ...
I-Architural Expanded Metal
Insimbi enwetshiwe yokwakha ifaka i-mesh yophahla, isisetshenziswa se-facade, izihlukanisi zesikhala, amathesi emafeshini, isisetshenziswa sefenisha, i-mesh yokwakha 2.Izinto ezijwayelekile ze-facade cladding mesh ziyizicucwana ezenziwe ngomshini nephepha le-aluminium. Lezi zinto zokwakha zihlala isikhathi eside futhi kungenzeka ukuthi kube nokumelana okuhle kwe-abrasion. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokubumbana okuqinile kwento, inomoya omuhle wokuphefumula kanye nomphumo womhlobiso njengomhlobiso wangaphandle wodonga. Futhi ngezinqubo ezahlukahlukene zokukhiqiza, i-Insta yayo ...